Mejupụtara Hydraulic Press, Smc Hydraulic Press, Deep ịbịaru Press - Zhengxi
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ, dị ka ọtụtụ haịdrọlik presses, tensile haịdrọlik presses [...]GỤKWUO
Ilekwasị anya na haịdrọlik akụrụngwa akụkụ akpaka akụrụngwa na unmanned omumuihe.GỤKWUO
Na-elekwasị anya na mgbe-sales ọrụ Nkwado na ọkọnọ nke akụkụ ahụ mapụtara. Ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ [...]GỤKWUO
Ọ nọgidewo na-enwe mmekorita chiri anya na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mahadum a ma ama na ụlọ ọrụ nyocha maka ogologo oge ma kpebisie ike ịbụ onye ọsụ ụzọ teknụzụ na ụlọ ọrụ igwe eletriki.
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ígwè hydraulic ndị mejupụtara, ike ikuku hydrogen na-arụ ọrụ, ntụ na-akpụ igwe eletriki hydrogen, na-akpụzi igwe haịdrọlik, na idozi igwe eletriki ha, anabatala nke ọma site na ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ.
Mejupụtara SMC BMC haịdrọlik ...
4 kọlụm miri ịbịaru hydra ...
Automatic Ferrite Magnetik ...
Akpaka SMC Production Li ...
Osisi 1: 9000SQM Osisi 2: 48000SQM
Around mmadụ 150
N'ime 60 tent
Mmepụta igwe bara uru na 2017
Usoro ọrụ kachasị ukwuu na iji arụmọrụ zuru oke na mpaghara Sichuan
Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd. dị na ọmarịcha Mpaghara Qingbaijiang Free Trade nke Chengdu. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 45,608, gụnyere mpaghara ogbako dị arọ nke 30,400 square mita. Ọ bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ ọkachamara emeputa nke haịdrọlik presses na China. The ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 100 injinia na technicians na ọtụtụ nke mba mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ. Ọ nọgidewo na-enwe mmekorita chiri anya na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mahadum a ma ama na ụlọ ọrụ nyocha maka ogologo oge ma kpebisie ike ịbụ onye ọsụ ụzọ teknụzụ na ụlọ ọrụ igwe eletriki.
Iji ka mma ijere ndị ahịa ozi, Zhengxi Group eguzobewokwa ngalaba abụọ: Chengdu Zhengxi Robotics Co., Ltd.-na-elekwasị anya na akụrụngwa akụrụngwa nke akụrụngwa akụrụngwa na ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ; Chengdu Zhengxi Smart Technology Co., Ltd.-na-elekwasị anya na mgbe-sales ọrụ Nkwado na ọkọnọ nke akụkụ ahụ mapụtara. Ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ na-agbasi mbọ ike maka "Zhengxi" ka ha wee bụrụ akara ama ama n'ụwa niile!
Companylọ ọrụ anyị na-abawanye iji ụkpụrụ mba na ụlọ ọrụ, na-achịkwa usoro ọ bụla, na-ekwe nkwa ogo nke akụrụngwa ọ bụla. Mgbe akụrụngwa ahụ lara ahịa, anyị ga-eme nyocha zuru ezu gbasara arụmọrụ nke ngwa anyị, mezie teknụzụ anyị na ogo anyị. Anyị nwetakwara akwụkwọ ISO9001: 2008 na CE. Companylọ ọrụ a bụ nke kachasị ukwuu yana yana arụmọrụ zuru oke na mpaghara Sichuan.
Chengdu Zhengxi haịdrọlik pịa emeputa n'ụzọ zuru ezu mejuputa ISO9001 àgwà usoro na nditịm implements atọ nnyocha na mmepụta, ya bụ akụrụngwa nnyocha, usoro nnyocha, na factory nnyocha; A na-anakwere usoro dịka nyocha onwe onye, ​​nyocha ibe, na nyocha pụrụ iche na usoro mgbasa ngwaahịa iji hụ na ngwaahịa dị mma. Gbaa mbọ hụ na ngwaahịa ndị anaghị agbanwe agbanwe anaghị ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Hazie mmepụta n'ụzọ doro anya dịka ihe onye ọrụ chọrọ yana ụkpụrụ mba dị mkpa, nye ngwaahịa, ma hụ na ngwaahịa ndị enyere bụ ngwaahịa ọhụrụ na nke a na-ejighi, wee jiri akụrụngwa kwesịrị ekwesị na teknụzụ dị elu iji hụ na ngwaahịa, nkọwa yana arụmọrụ dabara chọrọ onye ọrụ. A ga-ebuga ngwongwo ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na nkwakọ ngwaahịa na akara ahụ ga-agbaso ụkpụrụ mba na ihe ndị ọrụ chọrọ.